Mumwe wevakuru vevanyori (uye mukadzi kaputeni) wegungwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, Novela
Kubva kuruboshwe kurudyi: Nemo (James Mason), Jack Aubrey (Russell Crowe), Wolf Larssen (Sebastian Koch), Ahab (José María Pou), Jonathan Clark naHoratio Hornblower (Gregory Peck)
Nhasi ndeimwe ye vatungamiriri vegungwa muzvinyorwa, kuti kune zvakawanda e chisingakanganwiki kune avo vedu vanofarira iyo nautical adventure genre. Chii chimwe, cinema kwakavaita kuti vawedzere kusafa uye kufarirwa. Rangarira kuti hausi mhando iyo munhu wese anofarira kana iri nyore kuita.
Saka ichi chiyeuchidzo chinhu chinoenda vatungamiriri vakaita saNemo, Jack Aubrey, Wolf Larssen, Ahab, Jonathan Clark, Horatio Hornblower uye mukuru uye marquise Dolores del Castillo. Izvo zvakagadzirwa nevanyori vakakurumbira se Jules Verne, Herman Melville, Jack London, Patrick O'Brian, CS Forester, Rex Beach kana Emilio Salgari.
1 the nemo
2 Jack Aubrey uye Horatio Hornblower
3 Ahabhi naWolf Larssen
Jules Verne aive nyanzvi yekugadzira zvinyorwa zvemabhuku Chemhondoro Grant, Hatteras, Dick jecha (uyo aingova nemakore gumi nemashanu chete) uye, zvechokwadi, Nemo. Uye inofungidzirwa imwe yeanonyanya kufadza mavara. Izvo zvakare zvakaonekwa mune ake maviri enganonyorwa: Zviuru makumi maviri zvemitambo yekufamba pasi pemvura y Chitsuwa chisina kujairika.
Es kupenya, tsika, isina nyika asi nehumambo pamusoro pemakungwa ese epasi. Muenzaniso wemurume wemazuva ano, wesainzi, uyo tenzi tekinoroji uye haadi kuzviisa pasi pehurumende ipi neipi. Asi pfungwa yake yerusununguko inoenda pamusoro peiyo yevamwe uye anorasikirwa nayo. Mune firimu vhezheni ye 1954 Disney mutambi weBritish akairidza semumwe munhu James Mason.
Jack Aubrey uye Horatio Hornblower
Ndakavaisa pamwechete nekuti ndeavo vanorarama panguva imwe chete uye zviitiko zvavo zvinoitika mu napoleonic hondo yeChirungu neFrench pagungwa. Yakagadzirwa zvichiteerana na Patrick O'Brian naCecil Scott ForesterIvo vaviri vakatarisana zvachose mavara.
Horatio hornblower akaberekerwa mu 1937 nenyeredzi 11 enganonyorwa uye 2 pfupi nyaya. Is based mumufananidzo weumambo wechikepe cheChirungu Thomas Cochrane. Akashinga uye ane hunyanzvi, asi pamwe akanyanya, muna 1951 vhezheni yakadzikamisa nhetembo dzake nhatu yakaunzwa kuchiratidziro chikuru ndokunzi zita Muchinda wemakungwa. Yakaridzwa nenyanzvi mune cinematic sea captain, Gregory peck.
Padanda rakatarisana iri Jack Aubrey, protagonist we anopfuura makumi matanhatu enganonyorwa, iyo inotungamira kushinga kune kuzvikudza uye hunenge upenzi. Yakavhurika-pfungwa, ine kuravira kwemumhanzi, waini, vakadzi uye hupenyu hwakanaka pamwe nehondo. Pamufirimu Russell Crowe Akanyangarika kuchidudzira mukati Master & Mutungamiriri.
Ahabhu uye Wolf Larssen
Uye ini ndinofananidza machinda aya ekuti pamwe ndiye akasviba zvakanyanya mumabhuku, kunyanya Ahabu waHerman Melville. Ahabhi nekuda kwekunyanyisa kwake kubata Moby Dick chinova ndicho chikara chiri maari. Uye iyo Wolf Larssen Jack London ndeye Nemo ane hutsinye uye anotyisa, asi zvakare akangwara uye ane tsika.
Pa cinema Ahab anga aine zviso zvakawanda, asi chinonyanya kuzivikanwa ndechekuti Gregory peck zvakare. Pano munguva pfupi yapfuura mune yemitambo vhezheni yakaitwa neakakura Jose Maria Pou.
Ziva zvakare se "murume weBoston"Yakagadzirwa muna 1946 nemunyori weAmerica Rex Beach, akafurirwa zvikuru nebasa reLondon. Yaive iri Nyika iri mumaoko ako, uko Clark ari akashinga uye asingatyi muvhimi chisimbiso kubva kuSan Francisco. Vanoda tenga Alaska kubva kumaRussia, asi zvirongwa zvake zvinoshandurwa paanosangana neyakaverengeka Marina Selanova. Gregory Peck aive mumamuvhi zvakare mu yakanaka 1952 vhezheni.
Uye ndiani mumwe Emilio salgari kugadzira iyo Marchioness Dolores del Castillo, iyo mushanyi uye kaputeni weYucatan, inoiswa pabasa reSpain mu Cuban Hondo kuunza maoko kumauto ari kurwa ikoko. Imwe yemanoveli mashoma nemukadzi protagonist seanotyisa uye anotyisa sevamwe vake vechirume. Uye ngatirangarirei kuti Salgari yakagadzirawo Captain Dutu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mumwe wevakuru vevanyori (uye kaputeni) wegungwa